Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Kala Miiro Waayadan By C/lahi Cabdi Ibraahim.
Maqaal: Kala Miiro Waayadan By C/lahi Cabdi Ibraahim.
Posted by Dulmane	/ January 26, 2019
Nidaamka waafaqsan habsami usocdka Noloshu wuxuu salka ku hayaa tiirar Dhawr ah:-
1-kalsooni la Isku qabo, islamarkaasina jawiga baxnaanintuna uu ka shaqayn karo madasha waayaha nololeed Qaybaheeda kala duwan.
2-xilkasnimo ay muujiyaan Dadka iyaga markaas hawlaha Siyaasadu ka dhaxayso ay u wajahaan habdhaqan siyaasadeed oo hami sare leh.
3-maaraynta iyo islafalgalka aragtiyada kala duwanaan kara, isla meel dhigistooda iyadoo la Isku qancinayo hab waafaqsan Danaha guud ee Ummadeena.
Falsafada odhanaysa waxaan markasta xeerinaynaa inagoo dhiirigalinayna bartilmaameedka ujeedadeenu tahay, inaan ka talaabsano Waxyaabaha ay tahay inaan ka talaabsano iyadoo looga goleeyahay ilaalinta Amuuraha badan ee inaga dhexeeya.
Taas macnaheedu Waxay tahay waxaan horumarinaynaa waxaan Isku Aragtida ka nahay,inagoo isgarab dhigayna intii habkale wax isu tusta. Uugu danbayntana Waxay soo qaadayaan tubta toosan.
Dulucda Qormadaydan waxaan ku muujinayaa inay jiraan shakhsiyaad laqabsaday Daba dhilifnimadii maafiyadii dhiigyacabtii la hadhay Dadkeena, gacanta hadii la gooyo gumudkaa dhaqdhaqaaqa weeye xaalkoodu.
Waxayna ka noqotay Caado iyo dhaqan ay rabaan inay ka samaystaan say uugu noqon lahaayeen adeegayaal Dano Cidkale fuliya iyagoon waxba xeerinaynin taasina maanta socon mayso. Hayeeshee iyagoo Daalan ha Galaan godkooda markaas ayay nasanayaan miyirkuna ku soo noqon!
Shakhsi kasta halkuu isdhigo ayuu oo-layaa! Danayste warkiisu wuu soo afjarmay,xaqiiqada cidii baal marsan Hadayna ka waantoobin iyadaa ku Dhib qabta markan. Noloshuna jaran-‘jarooyin isdulyaal, Maalinba waa nooc! Maanta xiligii dhalanteedka iyo male awaalku dhamaa,dadkaagana dhinac ka raac.